प्रथम ज्ञानकुञ्ज म्याराथुन २०७६ सम्पन्न | नुवागी
काभ्रे, जेठ ३२ । बनेपास्थित ज्ञानकुञ्ज शैक्षिक प्रतिष्ठानको आयोजनामा प्रथम ज्ञानकुञ्ज म्याराथुन सम्पन्न भएको छ ।
एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरु दुव्र्यसनमा नफसुन भन्ने मूल उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त प्रतियोगितामा छात्र तर्फ बालनिकेतन माध्यमिक विद्यालय, बनेपाका प्रवेश राईले २९.०७ मिनेटमा दुरी पुरा गरी प्रथम भएका थिए । उनले नगद रु. १५००० सहित सिल्ड तथा प्रमाण पत्र पाएका थिए । बालनिकेतन माध्यमिक विद्यालयकै सुकराम बम्जमले २९ मिनेटमा दुरी पुरा गरी द्धितीय भएका थिए । उनले नगद रु १०,००० सहित सिल्ड तथा प्रमाण पत्र पाएका थिए । प्रभात माध्यमिक विद्यालय, भक्तपुरका अरफिन्ट तामाङ्गले २९.१९ मिनेटमा दुरी पुरा गरी तेस्रो भएका थिए । उनले नगद रु. ५००० सहित सिल्ड तथा प्रमाण पत्र पाएका थिए ।
छात्रा तर्फ जेसीस् सेकेन्डरी स्कुल, भक्तपुरका श्रेयष्का शिल्पकारले १८.५ मिनेटमा दुरी पुरा गरी प्रथम भएका थिए । उनले नगद रु. १५००० सहित सिल्ड तथा प्रमाण पत्र पाएका थिए । जेसीस् स्कुलकै प्रकृति सुवालले १९.३ मिनेटमा दुरी पुरा गरी द्धितीय भएका थिए । उनले नगद रु १०,००० सहित सिल्ड तथा प्रमाण पत्र पाएका थिए । सेन्टलम एकेडमी, श्रीखण्डपुरका दुर्गा श्रेष्ठले २१.१२ मिनेटमा दुरी पुरा गरी तेस्रो भएका थिए । उनले नगद रु. ५००० सहित सिल्ड तथा प्रमाण पत्र पाएका थिए ।
कार्यक्रममा काभ्रे जिल्लाका एकमात्र अन्तराष्ट्रिय रेफ्रि ससस्त्र प्रहरी निक्षिक विजय कुमार के.सी., म्याराथुन धावक राकेश तामाङ्ग, म्याराथुन धावकहरिसुन्दर बैद्यलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्रा.डा. रामकण्ठ माकजूले सम्मान गरेका थिए । माकजूले विजयी खेलाडीहरुलाई पनि पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।
ज्ञानकुञ्ज शैक्षिक प्रतिष्ठानका अध्यक्षसुरकृष्ण बैद्यको उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत गरेका थिए । कार्यक्रममा ज्ञानकुञ्ज शैक्षिक प्रतिष्ठानका प्रबन्ध निर्देशक, सञ्चालक प्रताप वैद्य, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नेपाल पत्रकार महसंघ काभ्रे जिल्लाका अध्यक्ष मोतिराम तिमल्सिना तथा विशिष्ट अतिथि कीर्तिमान धावक कान्छीमाया कोजुले आफ्नो विचार राखेका थिए ।